Indlela yokwenza i-Fake News News: IziCwangciso zezifundo
Injongo yeSatire njenge "I-Fake News" iSicwangciso seSifundo
I-Fake News: Ingxaki ekhulayo kwi-Intanethi yesihloko sale si cwangciso sesifundo kumaBakala 9-12. Izithombe zeDNY59 / GETTY
Ukuxhalabisa ngokusasazeka kweendaba "eziyinyumba" kumajelo asekuhlaleni kubonakala ngo-2014 njengabantu abadala kunye nabafundi banyuse ukusetyenziswa kwabo kweendaba zoluntu njengeqonga lokufumana ulwazi malunga neziganeko zangoku. Esi sifundo sicele abafundi ukuba bacinge ngokubaluleka ngokusebenzisa ibali leendaba kunye nesingeniso kwisiganeko esifanayo ukuze bahlolisise indlela nganye inokukhokelela ngayo ukutolika okuhlukile.
Ixesha eli-45 lemzuzu elinesibini (izabelo zokongeza xa zifunwa)
Ukuphuhlisa ukuqonda kwe-satire, abafundi baya kuthi:
Qwayelana neengcamango ezisisiseko emva kwe-satire
Hlaziya ukusebenzisana phakathi kwe-satire kunye neziganeko zangoku
Basebenzisa ulwazi lwabo lwe-satire kunye neendaba zokudala isiqwenga sabo satirical
Imigangatho eQala yokuFunda nokuBhala kwiMbali / kwiSifundo seNtlalo:
Cacisa ubungqina obuthile bokweseka ukuhlalutya imithombo eprayimari neyesekondari, ukudibanisa ulwazi olufunyenwe kwiinkcukacha ezithile ukuqonda ukubhalwa kwetekisi ngokubanzi.
Qinisekisa iingcinga eziphambili okanye ulwazi lomthombo oyintloko okanye wesibini; kunika isishwankathelo esifanelekileyo esenza ukuba kucace ubudlelwane phakathi kweenkcukacha eziphambili kunye neengcamango.
Hlola iingcaciso ezahlukeneyo malunga nezenzo okanye iziganeko kwaye ubone ukuba yiyiphi ingcaciso ecacileyo ehambelana nobungqina bombhalo, ukuvuma ukuba isicatshulwa sishiya imicimbi engaqinisekanga.
Hlola iingcamango zombhali ezahlukahlukileyo kumcimbi wesiganeko okanye ukukhupha iimangalo zabalobi, ukuqiqa kunye nobungqina.
Ukudibanisa nokuvavanya imithombo emininzi yolwazi eboniswe kwiifom ezahlukeneyo kunye nemidiya (umz., Ukubukeka, ukulinganisa, kunye namagama) ukuze kulungiswe umbuzo okanye ukulungisa ingxaki.
Hlola indawo yombhali, amabango kunye nobungqina ngokubambisana okanye kucelomngeni ngolunye ulwazi.
* Kusungulwe kwi- PBS kunye ne -Learning Network yeNTimes
Umsebenzi we-1: Iindaba Iindaba: I-Facebook ye-Satire Tag
Izithombe zeDNY59 / GETTY
Yintoni i satire?
"I-Satire iyindlela eqeshwe ngababhali ukuba baveze baze bagxeke ububudenge kunye nenkohlakalo yomntu okanye uluntu ngokusebenzisa amahlazo, ukunyaniseka, ukunyaniseka okanye ukuhleka usulu. Uhlose ukuphucula uluntu ngokugxeka ubububi bayo kunye neengxaki" I-LiteraryDevices.com)
1. Abafundi bafunda ngo-Agasti 19, 2014, i-Washington Post inqaku elithi " Facebook 'satire' lingasusa i-intanethi yecandelo leendaba ezimbi. Inqaku elibhekiselele kwi- News News , i-website "ejoliswe kwiinjongo zokuzonwabisa kuphela."
Ngokwe-disclaimer ye- Empire News :
"I-website yethu kunye nomxholo wemidiya yoluntu isebenzisa amagama angamaqhinga kuphela, ngaphandle kweemeko zoluntu kunye noluntu oludumile."
Inkcazo evela eWashington Post kwinqaku:
"Njengokuba izingosi zentengiso zanda kakhulu, kunzima kakhulu kubasebenzisi ukuba bazilawule. Iposi eliphezulu kwiGoogle News liza kuziqhayisa ngaphezu kwesahlulo sesigidi sesabelo se-Facebook, ngaphezu kweyona nayiphi na iqonga lezentlalo. ulwazi luya kusasazeka kwaye lugqithise, luya kuthatha inqaku le nyaniso. "
Buza abafundi ukuba "vala ukufunda" le nqaku usebenzisa izicwangciso eziphakanyiswe yiStanford History Education Group (SHEG):
Ziziphi iimbono ezenziwe ngumlobi?
Ubungqina buni na umbhali?
Liliphi ulwimi (amagama, imifanekiso, imifanekiso, iimpawu) ngaba umlobi usebenzisa ukunyanzela abaphulaphuli beendaba?
Ulwimi lwalowo lubonisa njani imbono yombhali?
2. Emva kokufunda le nqaku, cela abafundi:
Yintoni oyiphendula ngokukhawuleza kweli nqaku ngaphambi kokuxoxa?
Yintoni eli nqaku lifuna ukusibonisa ngokumahluko phakathi kwe-satire kunye neendaba "zangempela"?
Kutheni abanye abantu bephutha i-satire yeendaba ezilungileyo?
Ziziphi izinto ezixhalabisayo malunga ne-satire okanye iindaba zobuxoki?
Umsebenzi wesi-2: Thelekisa kunye neeNdaba zoNxibelelwano kunye neSatire kwi-Keystone Pipeline
Ulwazi lweNtsholongwane kwiSystem Keystone Pipeline System:
I-Keystone iPipeline System yinkqubo yombhobho yeoli ephuma eCanada eya eMelika. Le projekthi yaveliswa ngo-2010 njengentsebenziswano phakathi kweTransCanada Corporation neConocoPhillips. Iipayipi ezicetywayo zihamba ukusuka kwi-Western Canada Sedimentary Basin e-Alberta, eCanada, kwizinto zokucocwa e-Illinois naseTexas, kunye nakwiifama zee-tank eoli kunye neziko le-oil distribution centre e-Cushing, e-Oklahoma.
Isigaba sesine nesigxina seprojekthi, esaziwa njengeChethstone XL ipayipi, yaba ngumqondiso wemibutho yokusingqongileyo yokubhikisha ukutshintsha kwemozulu. Ezi ngxenyana zokugqibela zetayipipi lamanzi e-oyile engamafutha angenayo ukungena kwiipayipi ze-XL e-Baker, Montana, endleleni eya kwindawo yokugcina nokusabalalisa e-Oklahoma. Iiprojekti zeCandelo eliPhambili leXL liye lidibanisa i-510,000 ngemibhobho ngosuku ngemali epheleleyo ukuya kwi-1.1 yezigidi imitha ngemini.
Ngo-2015, umbhobho wamkelwa ngumongameli waseMerika uBarack Obama.
1. Cela abafundi ukuba "bavale ukufunda" zombini amanqaku usebenzisa izicwangciso eziphakanyiswe yiStanford History Education Group (SHEG):
Ziziphi iimangalo ngamnye wabalobi abazenzayo?
Ubungqina buni nawuphi na umbhali?
Liliphi ulwimi (amagama, imifanekiso, imifanekiso, iimpawu) ngamnye umbhali usebenzisa ukunyengela abaphulaphuli?
Ulwimi kwimiqulu ngayinye lubonisa njani imbono yombhali?
2. Banike abafundi ukuphinda uphinde usebenzise amanqaku kwaye usebenzise ukucatsanisa nokucwangcisa izicwangciso zokubonisa indlela umcimbi weendaba ngayo ("I-Obama vetoes i-Keystone Pipeline") - Isiqendu esivela kwi- PBS NewsHour Extra , ngoFebhuwari 25, 2015) ihluke kwinqaku le-joke kwisihloko esifanayo ("I-keystone Veto Ithengwa Ngokwemvelo Kwi-3Or 4Ieyure ezininzi" ukusuka kwi -Onion, ngoFebhuwari 25, 2015) .
Ootitshala bangathanda ukubonisa iPBS (ukhetho) Ividiyo kwi sihloko.
3. Baxelele abafundi ukuba baxoxe (iklasi epheleleyo, amaqela, okanye ukujika nokuthetha) iimpendulo kule mibuzo elandelayo:
Yintoni oyenzayo ngokukhawuleza kwinqaku nganye phambi kwengxoxo?
Yintoni le manqaku abonisa ngayo ngokumahluko phakathi kwe-satire kunye neendaba "zinyani"?
Ezi ziqendu ziphi na?
Yiyiphi imvelaphi yolwazi onokuyimfuneko ukuba "ufumane" amahlaya?
Iziganeko zembali ezinzulu zingenziwa njani ngeendlela ezihlekisayo? Unokufumana imizekelo?
Ngaba ukuhamba kwexesha kusinika amandla okuhlekisa ngexesha elidlulileyo?
Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka ukuba satire ibe yinto engabalulekanga?
4. Ukusetyenziswa: Banike abafundi ukuba babhale iindaba zabo zeendaba ezihlekisayo malunga neenkcubeko okanye zembali ezenzekayo ezikhethiweyo ezingabonisa ukuqonda kwabo ngokusebenzisa iimeko zenkcubeko kunye / okanye zembali. Ngokomzekelo, abafundi bangasebenzisa imicimbi yezemidlalo yangoku okanye imfashini yefashini okanye babuke emva kokubhala kwakhona iziganeko zembali.
Yiyiphi imvelaphi yophando okuyimfuneko ukuba ubhale isiqwengqo?
Ziziphi izinto zeqendu lakho elisebenzayo njenge-satire?
Ezi zinto zidlala njani ekuqondeni jikelele kwesi siganeko?
Izixhobo zeTech for the learners to use: Abafundi bangasebenzisa esinye sezixhobo zedijithali ezilandelayo babhale iincwadana zeentloko ezihlekisayo kunye neendwangu zamabali. Ezi website zikhululekile:
I-Fake Newspaper Generator Tool
Olongezelelweyo "IiNdaba zeNkohlakalo" Izibonelelo zootitshala beBakala 9-12
Uhlalutyo lwezopolitiko ngokuSatire: Isicwangciso sesifundo kwi-PBS.org
Isikhokelo seNkundla yeeSpopes kwiiNkcukacha zeeNkohlakalo kunye nabaPhuthuli bakaHoax
I-Snopes.com ka-2014 isikhokelo esilungele ukukhawuleza kwe-Intanethi, ukukhutshwa kweendaba-ndaba, iindaba zentlalo ezisebenzisayo kwicala elimnyama, nguKim LaCapria (ihlaziywe: Nov 02, 2016)
About.com: Abahlaziyi beLight Night basebenzisa i-satire / i- humor
Ukuchonga iSatire kunye neSimpsons: ukusuka kwi-Read, Bhala, Cinga iwebhsayithi eqhutywe ngeBhunga leSizwe lootitshala beNgesi.
I-Fake News iplagi evulekileyo (i-Chrome kuphela) enikezwa ngu-Brian Feldman Associate Editor - iNew York Magazine
Imiba yokubeka ibali kwiMaphu yeMerika yeThala
Imibuzo yoCwangciso lwemihla ngemihla: Izixhobo zeKlasi leSekondari
6 Intetho ngamaBhali baseMerika kwiiKlasi ze-ELA zeSondari
6 Abadala baseGreek Sculptors
Ukufumana i-ACT ACT Course kuwe
IJografi yaseBrithani Columbia
I-Cast of 'South Park'
I-Nissan Truck High Challle Problem